Ikhaya elihle, eliphangaleleyo langoku elinombono wonxweme
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguVerona
Indawo yokuhlala ekhethekileyo kunye nephangaleleyo kwidolophu egubhayo yolwandle enembono entle yonxweme. Indawo enkulu yokuhlanganisa ukonwabela ububele basekhaya kumgama wokuhamba eCarnlough okanye ujonge unxweme olumangalisayo lwe-Antrim nosapho kunye nabahlobo. Hamba uye elunxwemeni, utye kwaye usele kwimivalo yendawo kwaye usebenzise njengesiseko sokuhlola ukuba unxweme oluhle lunokubonelela ngantoni.
Ipropathi yangoku, ebanzi enamagumbi amane okulala amakhulu kunye negumbi lokuhlambela eline (zonke zinebhafu / ishawari), zixhamla kwiindawo ezininzi zokuzonwabisa (ngaphakathi nangaphandle). Indawo yokuphumla, iGumbi leMidlalo, iGumbi loMculo kunye neKhitshi zonke ezineembono ezintle kodwa iimbono zithathwa ngokugqibeleleyo kumathambeka angaphandle kuwo onke amanqanaba ngeglasi yewayini.
Ukufikelela kumgangatho osezantsi kuthe tyaba kwiindwendwe ezinomngeni wokushukumiseka, kwaye kukho iofisi kumgangatho osezantsi enebhedi yesofa ephindwe kabini esebenza njengegumbi lokulala elongezelelweyo fir ukufikelela lula. Kukho igumbi lokuhlambela elikhulu elisezantsi elisecaleni kweli gumbi, elinebhafu kunye neshawari ngaphezulu.
Imigangatho yomgangatho ophantsi yonke ikwinqanaba elineendawo zangaphakathi, ivumela ukufikelela kuzo zonke iindwendwe ezincinci nabadala.
Ipropathi inezinto ezininzi ezenza ukuba onke amalungu kunye nazo zonke izizukulwana zosapho zibe neholide emnandi.
ICarnlough yidolophu yaselwandle ephithizelayo ebonelela ngazo zonke izinto eziluncedo iindwendwe ezizifunayo ngeholide emnandi. Iindawo zokutyela zasekhaya, imivalo, ulwandle, izibuko, amatye, i-kayaking kunye nokukhwela ibhodi yonke kumgama wokuhamba.
Umbuki zindwendwe ngu- Verona
Ukuba iindwendwe zifuna ukunxibelelana, ndonwabe ngakumbi ukufumana imiyalezo okanye iifowuni xa zifunwa.